China yakapfava PVC USB fekitori uye vagadziri | SJJ
Munguva yemazuva ano, munhu wese ane imwechete kana yakawanda USB yekuchengetedza ruzivo kana kuendesa data kuwanda makomputa akasiyana.
Munguva yemazuva ano, munhu wese ane imwechete kana yakawanda USB yekuchengetedza ruzivo kana kuendesa data kuwanda makomputa akasiyana. IyoYakapfava PVC USB inogona kuchengetedza iyo USB mutyairizvakanaka kwazvo neyakavharika uye yakagadzikana yakapfava PVC chifukidzo. Iwe haufanire kunetseka nezve iyoUSB mutyairikutyorwa kana radonha. Iyo yakapfava PVC chifukidziro inogona kuitwa mumhando dzakasiyana dzinoyevedza kana akasiyana mavara musanganiswa. Iwo akazara 3D marogo anoita kuti iwo magadzirirwo azere uye akapfuma. Izvi zvinonyatsotsanangura pfungwa dzemugadziri nemweya yakadzika. Zvisungo zvakasiyana semakiyi anokosha, tambo, macheni, macheni macheni kunze kwekunge mutyairi we USB achiwana mamwe mabasa eiyonyoro PVC USB mutyairis. Paunenge uri kushandisa yakapfavaPVC USB, urikunakidzwa nenguva inoshamisa yehupenyu kuburikidza nezvinhu zvakakosha.
Chikamu che nyoro PVC USB mutyairizvinobva pa2 GB kusvika pa256 GB, inosangana nezvido zvako zvakasiyana nezvidiki kana zvihombe zvemakoramu zvinoda. Mitengo yacho inogona kutaurika zvinoenderana nezvaunoda zvakadzama.
Zvishandiso: Nyoro PVC + USB mutyairi
Motifs: Kufa Yakarohwa, 2D kana 3D, maviri mativi
Kurongedza: Blister kurongedza, kana kutevedzera kuraira kwako.
Pashure: Metal Yakagadzirwa Acrylic Medals
Tsika USB Flash Drives
PVC USB mutyairi
nyoro PVC USB mutyairi
USB Inodziya Coasters